Uyifaka njani i-SuperTuxKart umdlalo kwi-Ubuntu nakwiziphumo zayo? | Ubunlog
Uyifaka njani i-SuperTuxKart umdlalo kwi-Ubuntu nakwiziphumo zayo?
SI-uperTuxKart yinto eyaziwayo yomdlalo we-arcade we-3D kwiLinux yenzelwe ukusebenza kwe Linux.
Nangona oku kunjalo umdlalo weplatform, njengoko inenkxaso yeLinux, Windows, Mac kunye ne-Android. ISuperTuxKart iyafana nomdlalo weMario Car kwaye ingumthombo ovulekileyo ngokupheleleyo kwaye isimahla.
Inguqulelo ye ISuperTuxKart 0.9.3 yaqala yakhutshwa kunyaka ophelileyo, Ukuchaneka ngakumbi ngo-Novemba 2017 kwaye kuye kwafumana ukuthandwa ukusukela ngoko.
Kuza nabalinganiswa abavela kwiiprojekthi ezahlukeneyo zomthombo ovulekileyo kubandakanya neendlela ezahlukeneyo zomdyarho. Okwangoku ngumdlali omnye okanye umdlalo wabadlali abaninzi basekuhlaleni.
Nangona kunjalo, ingxelo ekwi-Intanethi apho abadlali abaninzi banokudlala khona isaqhubeka.
Irekhoda yakhiwe kumdlalo onokugcina iMJPEG, VP8, VP9 okanye H.264 ividiyo kunye nevidiyo yeVorbis.
Inguqulelo ibandakanya iindlela ezintsha ezininzi, iimodeli ezahlukeneyo kunye neempawu. Kule nguqulelo sele ikho, kukho umzila obekiweyo kwicandelo elibizwa ngokuba yi "Cornfield Crossing", indlela yasebusuku kwesinye sezixeko zaseYurophu esibizwa ngokuba "sisixeko sikaCandela", kunye nendawo yemfazwe entsha ebizwa ngokuba yi "Estadio Las Dunas". Uninzi lweetrekhi ziyafumaneka kuye wonke umntu.
1 Uyifaka njani iSuperTuxKart kwi-Ubuntu 18.10 kunye neziphumo?
1.1 Ukufakwa kweSuperTuxKart
2 Uyifaka njani i-SuperTuxKart kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Uyifaka njani iSuperTuxKart kwi-Ubuntu 18.10 kunye neziphumo?
Ubuncinci beemfuno zehardware
Ngaphambi kokufaka iSuperTuxKart, kufuneka uqiniseke ukuba uyahlangabezana neemfuno zomdlalo.
Umdlalo uneemfuno ezincinci zekhompyuter, nto leyo edibanisa abadlali abafuna ukonwabela imidlalo kuhlahlo-lwabiwo mali.
Nazi ezinye zeemfuno zehardware ekufuneka uhlangane nazo ngaphambi kokufaka iSuperTuxKart:
I-OpenGL 3.1 ehambelana neGPU
I-600 MB yendawo engenanto yediski
I-1 GB yememori
I-2 GHz iprosesa
Iadaptha yemizobo ubuncinci i-1GB VRAM
Ukufaka iSuperTuxCart kulula kwaye akufuni kujongana nezinto ezininzi kakhulu. Kulabo banomdla wokufumana lo mdlalo ubalaseleyo, kufuneka balandele inkqubo enikiweyo yokufaka lo mdlalo ku-Ubuntu nakwiziphumo zawo.
Ukuba usebenzisa Ubuntu 18.04 LTS okanye ngezantsi kule nkqubo siza kongeza i-SuperTuxKart Personal Package Archive (PPA) yokugcina kwindawo yakho.
Ukwenza oku, kufuneka bavule i-terminal nge (Ctrl + alt + t) kwaye kufuneka babhale imiyalelo ekhankanywe ngezantsi. Oku
sudo add-apt-repository ppa:stk/dev -y
Ngelixa pKulungiselelwe abasebenzisi be-Ubuntu 18.10 kwaye bavela kule nguqulo, sinokunyanzela ukuba isetyenziswe. Kuphela oku kufuneka sihlele imithombo yethu yoluhlu
sudo nano /etc/apt/ sources.list y añadimos lo siguiente:
deb http://ppa.launchpad.net/stk/dev/ubuntu bionic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/stk/dev/ubuntu bionic main
Emva koko sichwetheza:
Y Okokugqibela singenisa isitshixo soluntu nge:
sudo add-apt-key --keyserver keyserver.ubuntu.com 6D3B959722E58263
Nje ukuba kwenziwe oku, ngoku kufuneka sihlaziye uluhlu lwethu lweephakeji kunye neefositori nge:
Kwaye ekugqibeleni siyaqhubeka ukufaka usetyenziso kunye:
Ngoku ukuba uneempazamo kwindawo yokugcina (Ubuntu 18.10) unokukhuphela iphakheji yedeb yeenkqubo ezingama-64 ngalo myalelo ulandelayo:
Si Abasebenzisi benkqubo ye-32-bit ziiphakheji ekufuneka bezikhuphile zezi:
Kwaye ekugqibeleni kubasebenzisi beenkqubo ze-ARM (i-Raspberry Pi) iiphakheji zoyilo lwazo zezi:
Yenza ukhuphelo lweephakeji ngokwendlela oyile ngayo inkqubo yakho, Singaqhubeka nokuzifaka nomphathi wephakheji esiyithandayo okanye kwisiphelo sendlela:
Kwaye sisombulula ukuxhomekeka ngo:
Uyifaka njani i-SuperTuxKart kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ukuba ufuna ukususa lo mdlalo ngenxa yokuba ibingeyonto ubuyilindele okanye nangasiphi na isizathu. Ukukhubaza okanye ukuphelisa i-PPA kwinkqubo, vula nje itheminali kwaye wenze lo mthetho ulandelayo:
Kwaye ekugqibeleni singasusa usetyenziso kunye nazo zonke iifayile eziveliswe yile:
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Uyifaka njani i-SuperTuxKart umdlalo kwi-Ubuntu nakwiziphumo zayo?
Ungayitshintsha njani imvelaphi yesikrini se-GDM ku-Ubuntu?
I-Slack: Isixhobo esihle kakhulu sonxibelelwano seqela